အမျိုးသားသိုးသငယ် / သိုးသားရေ cashemere သဘာဝအမည်းရောင်လက်အိတ်စီတန်းထားသည်
သိုးမွေးဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည့်သိုးသားရေဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ သိုးမွှေးနံရံကပ်ထားသောသိုးမွှေးဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ ၀ တ်စုံမှ ၀ တ်စုံအထိ ၀ တ်ဆင်စရာအကောင်းဆုံးပုံစံဖြစ်သည်။ သိုးမွှေး cuff နှင့်နံရံအဆင်ပြေခြင်းနှင့်နွေး။ တင်းကျပ်မှုအားသင့်အားအရွယ်အစားနှင့်ကိုက်ညီအောင်နောက်ကျောတွင်သားရေခါးပတ်ဖြင့်ချိန်ညှိနိုင်သည်။ ဆောင်းရာသီတွင်လက်အိတ်တစ်ခုအပြီးသတ်ပါ။
အမျိုးသားသိုးသငယ် / သိုးသားရေသိုးမွေးကခလုတ်ဖြင့်ဆောင်းထားသည်
သိုးမွေးဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောအီသီယိုးပီးယားသားရေဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည့်အရာသည်ပေါ့ပေါ့တန်တန်အခါသမယအတွက်ဂန္ထဝင်ပုံစံဖြစ်သည်။ လက်ကောက်ဝတ်ရှိခလုတ်သည်သင့်လက်နှင့်ကိုက်ညီမှုကိုတင်းကျပ်စွာညှိနိုင်သည်။ ချောမွေ့။ ကြွယ်ဝသောသားရေဖြင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ၊ နောက်ဆုံးပေါ်ဖက်ရှင်များနှင့်အကောင်းဆုံးလက်မှုလက်ရာဖြစ်သည်။ ပြီးပြည့်စုံသောပေါင်းစပ်! သင်၏လက်များကိုနွေးရုံတင်မကအလွန်အေးမြစေသည်။
ဒီလက်အိတ်ကိုလက်မှုပညာရှင်တွေကလက်လုပ်ပြီးသားရေလက်အိတ်တွေအတွက် ၁၀ နှစ်ကျော်အတွေ့အကြုံရှိတယ်။ နှစ်ပေါင်းများစွာဂန္ထဝင်ပုံစံနှင့်လည်းဆက်လက်သွားလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်အလုပ်အတွက်၊ ညနေခင်းတွင်သို့မဟုတ်နေ့စဉ် ၀ တ်စားဆင်ယင်မှုအတွက်ဖြစ်သည်။ ဆောင်းတွင်း၌ကောင်းသောဝတ်ဆင်ရန်။ သင်၏လက်များသည်အမွေးကြမ်းနှင့်နံရံများနှင့်အတူနွေးထွေး။ နွေးထွေး။ အဆင်ပြေစွာပေါင်းစပ်။ ကြည့်ရှုနိုင်သကဲ့သို့ဝတ်ဆင်နိုင်သည်။ အေးတယ်!
ဒီလက်အိတ်ကိုလက်မှုပညာရှင်တွေလက်ဖြင့်အပ်ခဲ့တာနှစ် (၁၀) နှစ်ကျော်ရှိပါတယ်။ Classic ပုံစံကိုနှစ်ပေါင်းများစွာကြာအောင်လုပ်ထားနိုင်ပြီးဆက်လုပ်သွားမှာပါ။ ၎င်းသည်အလုပ်အတွက်၊ ညနေခင်းတွင်သို့မဟုတ်နေ့စဉ် ၀ တ်စားဆင်ယင်မှုအတွက်ဖြစ်သည်။ ဆောင်းတွင်း၌ကောင်းသောဝတ်ဆင်ရန်။ သင်၏လက်များသည်အမွေးကြမ်းနှင့်နံရံများနှင့်အတူနွေးထွေး။ နွေးထွေး။ အဆင်ပြေစွာပေါင်းစပ်။ ကြည့်ရှုနိုင်သကဲ့သို့ဝတ်ဆင်နိုင်သည်။ အေးတယ်!
အီသီယိုးပီးယားသိုးသားရေနောက်ကျောနှင့် deerskin စွန်ပလွံများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော Deerskin သည်အစိုင်အခဲ ဖြစ်၍ ကြာရှည်ခံသည်၊ လေကောင်းလေသန့်ရှင်းမှုရှိပြီးသင့်လက်များနှင့်ရှူရှိုက်နိုင်သည်။ နှစ်ခုပေါင်းစပ်ခြင်းနှင့်နောက်ဆုံးပေါ်ဖက်ရှင်များ၊ အကောင်းဆုံးလက်မှုလက်ရာဖြစ်ခြင်း ပြီးပြည့်စုံသောပေါင်းစပ်! သင်၏လက်များကိုနွေးရုံတင်မကအလွန်အေးမြစေသည်။
သိုးမွေးဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည့်သိုးသားရေဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ သိုးမွှေးနံရံကပ်ထားသောသိုးမွှေးဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ ၀ တ်စုံမှ ၀ တ်စုံအထိ ၀ တ်ဆင်စရာအကောင်းဆုံးပုံစံဖြစ်သည်။ အကောင်းဆုံးသောပစ္စည်းများ၊ နောက်ဆုံးပေါ်ဖက်ရှင်များနှင့်အကောင်းဆုံးလက်မှုပစ္စည်းများ၏အကောင်းဆုံးသောပေါင်းစပ်မှု။ ဆောင်းရာသီတွင်အကောင်းဆုံးလက်အိတ်တစ်ခု။
အမျိုးသားသိုးသငယ် / သိုးသားရေမွေးကဆောင်းချည်သားရေခါးပတ်ပါ
အီသီယိုးပီးယားသားရေသိုးရေ PALM နှင့်သိုးမွှေးထိုးထည်ပစ္စည်းစီးရီးများ၊ နှစ်ခုနှင့်ပေါင်းစပ်ထားသည့်နောက်ဆုံးပေါ်ဖက်ရှင်များ၊ ပေါ့ပါးခြင်း၊ သက်သောင့်သက်သာရှိခြင်းနှင့်အလှအပတို့အတွက်ကောင်းမွန်သောပေါင်းစပ်ခြင်း!